Saika nipoaka ny sarom-bilany… : nirongatra ireo mpivarotra amoron-dalana, tsy nahovoka ny Emmo/Reg | NewsMada
Saika nipoaka ny sarom-bilany… : nirongatra ireo mpivarotra amoron-dalana, tsy nahovoka ny Emmo/Reg
Nikatona ny ankamaroan’ny magazay. Tapaka nandritra ny ora vitsivitsy ny lalana. Horakoraka, hikiaka, fivelesana koveta lovia, vilany…, miampy filanjana sorabaventy. Izany no hetsika goavana nataon’ireo mpivarotra amoron-dalana marobe, tetsy Analakely, izay efa nahiana hivadika hetsi-bahoaka mihitsy, omaly. Tsy nahovoka, na tsy sahy nihetsika firy ny Emmo/Reg…
Niavaka ! Tsy toy ny fanenjika sy fangalapiery mahazatra amin’ny mpiasan’ny kaominina, tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, fa niseho ary naka endrika goavana ny fihetsiketsehan’ireo mpivarotra amoron-dalana, tetsy Analakely omaly maraina. Goavana, satria saiky rakotra azy ireo Anakalely iray vohitra, indrindra nanoloana ny lapan’ny Tanàna, na avy eo aloha na taty ambadika, manoloana ny Lycée JJ Rabearivelo rehetra iny. «Noana ny vahoaka madinika», «Avoahy ilay Mazda», «Tsy misy miala eto !»,… Izany ny santionan’ny sorabaventy nolanjain’izy ireo, narahina horakoraka, tsioka kiririoka, vely koveta, lovia sy vilany tsy nifandrenesana, nanerana ny arabe.
Ny fisian’ny lozam-pifamoivoizana, niseho teo amin’ny Petite Vitesse, no nahatezitra ireo mpivarotra amoron-dalana ka nampirongatra azy ireo. Nampahazo vahana be ny hetsika izany izay efa nahina mafy hivadika fihetseham-bahoaka mihitsy raha ny omaly. Nanala mpivarotra teny an-toerana ilay Mazda an’ny polisy kaominaly ka lehilahy mpivarotra iray nisahotaka nitsoaka no notsenaina fiara 4×4 iray nandeha teny an-toerana. Naratra mafy izy io vokatr’izay ary efa nalefa teny amin’ny hopitaly. Nandeha taorian’izay fa hoe namoy ny ainy ity farany. Araka ny fanamarinam-baovao anefa, avotra soa aman-tsara ihany ny ainy ary mbola manaraka fitsaboana, eny amin’ny hopitaly izy io.
“Manampatra fahefana ny mpiasan’ny kaominina”
Nanomboka teo ny fidinana an-dalambe, niainga tany Tsaralalàna, Andohan’Analakely teny amin’ny Pavillons, nanaraka ny araben’ny fahaleovantena manontolo, Soarano nitangorona teo amin’ny lapan’ny Tanàna. Araka ny filazan’ireo mpivarotra amoron-dalana, manampatra fahefana ary mangalatra ny entany ireo mpiasan’ny kaominina ka anisan’ny antony mahatonga izao hetsika izao. “Maka entana ireo, ary tsy fantatray izay itondrany ny entana. Tokony haverin’izy ireo izany. Tsy mba misy vahaolana tena izy koa ny fanalana anay, fa izahay aza nofitahina ka tsy manaiky intsony”, hoy i Dadafara, mpivarotra amoron-dalana. “Avelao hivarotra izahay na aiza na aiza, na ovina na ovina satria noana izahay, ary ny hohanina anio, tadiavina anio”, hoy ireo vehivavy mpivarotra.
“Misy mpikarama an’ady”
Nilaza ny mpitandro filaminana, tetsy andaniny, fa misy mpikarama an’ady tafiditra amin’ity hetsiky ny mpivarotra amoron-dalana ity. “Efa tazana ireo ary arahi-maso. Tsy mbola nisy aloha ny fihoaram-pefy hatramin’izao, ary voafehy ireo olona marobe”, hoy ny manambonihitra iray. Tazana tao anatin’ny lapan’ny Tanàna ny jeneraly Florens, lehiben’ny CIRGN. Araka ny efa naverimberin’ny mpitandro filaminana ihany, misy miketrika fanakorontanana eto amintsika. Manakaiky ny andron’ny 7 febroary, izay ahatsiarovana ireo voatifitra teny Ambohitsorohitra tamin’ny taona 2009. Misy ny mamoha fotamandry, ny mampifanandrify toe-javatra, izay tiana hapoaka. Mamofompofona raharaha mafana ity zava-niseho omaly ity. Hisy ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety ataon’ny Emmo/Reg, anio, hilazany ny fepetra mety horaisiny manoloana izao savorovoro izao.
Soratra: Yves S.
Sary : Njato Hervé